Hawwiin Keenya Itoophiyaa Baratte Uumuu dha.
Barattoonni Itoophiyaa keessa jiran ofiifi biyya isaanii akka jijjiiran gargaaruun kaayyoo keenya.
Barumsi Itoophiyaaf kaampaanii tola-ooltummaa yoo tahu kaayyoon isaa barmusa dijitaalaa barattoota Itoophiiyaatiif afaanota Itoophiyaa gara garaatiin dhiheessuu dha. Itoophiyaan biyya afaaniifi aadaa baay'eeti. Ummata biyyattii keessaa parsantaa 40 kan tahan ijoollee umrii 14rii gadiiti. Abjuun keenya barattoonni Itoophiyaa gargaartuuwwan barnoota dijitaalaa kan afaan isaaniitiin qophaahan fayyadamuun ofiifi biyya isaanii akka jijjiiran gargaaruu dha.
Odeeffannoo dabalataaf viidiyoo kana ilaalaa.
Barnoota saayinsii afaan sirritti hin dubbanneen barachuun baay'ee rakkisaa dha.
Rakkoolee barattoota Itoophiyaa mudatan keessaa inni tokko barnoonni ol-aanaan kan kennamu Afaan Ingiliiziitiin yemmuu tahu irra guddinni isaanii dandeettii Afaan Ingiliizii gahaa waan hin qabneef barnootawwan u'ulfaatoo (keessattuu kan herregaafi saayinsii irratti xiyyeeffatan) salphatti hubachuu dhabuu isaaniiti. Nu'i rakkoo manneen barnootaafi barattoota jidduu jiru kana ni furra jennee abdanna. Bakka manneen barnootaa bu'uuf fedhiifi humnas hin qabnu. Haa ta'u malee barattoota gargaaruun akka barnoonni salphatti galuuf godhuu ni dandeenya.
Barnootaan alatti barattoonni keenya itti gaafatamummaa baay'ee qabu.
Yeroo tokko tokko itti-gaafatamummaa umrii isaaniitii ol tahan baadhatanii yeroon isaan barnootaaf kennan dhiphataa taha. Akkuma beekkamu itti-gaafatamummaan kunniin keessattuu barattoota shamarranii irratti dhiibbaa guddaa godha.
Eelee dhaabuufi maatiif nyaata qopheessuu
Gabaa bahanii maatiif galii argamsiisuu
Obbolaawwan quxisuu kunuunsuu
Qaqqabiinsa barnootaa mirkaneessuu
Barnoota dijitaalaa afaanota Itoophiyaa garagaraatiin dhiheessuun biratti fakkeenyota barattoonni beekan fayyadamuun akka barnoonni salphatuuf goona.
Barnoonni dijitaalaa keenya baratoonni akka saffisaan qo'ataniifi akka irra deddeebi'an gargaara. Sababoota adda addaatiin yeroodhaaf barnootarraa ka'anis sagantaan keenya salphatti isaan kiisa.
Dabalataanis barnoonni keenya viidiyoolee salphaa tahaniin kan qindaa'eefi dhaabbolee barnootaa beekkamoo tahaniin kan deeggaramee dha.
Barattoonni akka kaayyoo isaanii bakkaan gahatan taasisuu.
Deeggarsi barbaachisaan barattoota Itoophiyaatiif osoo godhameefii bakka guddaa gahu.
Itoophiyaan biyya ijoollee lafaa ol-deemoofi dargaggeeyyaniiti. Dargageeyyiin kun of bira darbanii maatiifi hawaasa isaanii gargaaruu danda'u. Kana fiixaan bahuuf gaheen keenya barnoota haala salphaan dhiheessuufi mijjaawaa godhuu dha.
Dirreen Yimmaaruu maalinni?
Dirreen "Yimmaaruu" jedhamu barattoonni akka salphatti qo'atan isaan dandeessisa.
Dirreen kun appilikeeshinaan, marsaa fi chaanaala youtube-iin barattoonni barnoota barbaadan akka argatan dandeessisa. Itti-fayyadamiinsi isaa akka salphaa tahuufi qaqqabiinsa akka qabaatu jabaannee hojjataa jirra.
Gara fuulduraatti dirreewwan barnoota ogummaa, barnoota ol-aanaa fi guddinna dhuunfaa kan guddisan qopheessuuf hawwii qabna.
Waa'ee Yimmaaruu odeeffannoo dabalataa
Dhaabbilee garagaraa wajjiin qindoomnee kaayyoo keenya bakkaan ni geenya
Yeroo ammaa kana dhaaba beekkamaa kan tahe Kaan Akkaadaamii "Khan Academy" wajjiin walii-galtee qabna. Barnootawwan isaanii afaanota Itoophiyaa garagaraatti jijjiiruu irratti hojjachaa jirra. Michuuwwan biroo wajjiinis hojjachuuf fedhii qabna. Keessattuu qabiyyee barnootaa, hiikkaa fi qaqqabiinsa irratti dhaabbilee nu wajjiin hojjatan yeroo hundaa ni barbaanna. Waliin tokko taanee qindoomnee ijoollee Itoophiyaa irratti jijjiirama gaarii akka finnu shakki tokko hin qabnu.
Dhaamsa nuuf ergaa